Paartii Badhaadhiinaa - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 9:43 5 Hagayya 20219:43 5 Hagayya 2021
Sudaan mootummaa Itoophiyaa fi TPLF araarsuuf akka jettu himame
Sudaan deeggarsa hawwaasa idil-adunyaa waliin mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti araara buusuuf hojii eegaluuf jakka jirtuu gabaafame.
...tti maxxanfame 9:48 24 Adooleessa 20219:48 24 Adooleessa 2021
Furmaanni rakkoo siyaasa Itoophiyaa qaamoleen siyaasaa gadi taa'anii mari'achuun, akkamiin walii wajjin jiraanna kan jedhu irratti wal tahinsa irra gahuu qofa jedhan namni siyaasaa Leencoo Lataa.
...tti maxxanfame 9:34 11 Adooleessa 20219:34 11 Adooleessa 2021
Paartiin MM Itoophiyaa filannoo biyyaalessaa injifate
Paartiin MM Abiy Ahimad sagalee caalmaa olaanaatiin waggoota itti aanan shaniif injifate. MM Abiy gamasaanitiin filannoo hunda hammataa fi 'seena qabeessa' jechuun toora Tiwitara isaanii irratti ibsaniiru.
...tti maxxanfame 15:25 22 Waxabajjii 202115:25 22 Waxabajjii 2021
Humni Eeggataa Baha Afriikaa filannoo Itoophiyaa ilaalchisee gabaasa jalqabaa baase
Ergamni Taajjabbii Filannoo Humna Eeggataa Baha Afriikaa gareewwan taajabdootaa 12 naannolee shanii fi bulchiinsa magaalotaa lamatti bobbaasuun adeemsa filannoo biyyaalessaa marsaa 6ffaa taajjabuusaa ibsa har’a midiyaalef laaten beeksiseera.
...tti maxxanfame 3:48 28 Caamsaa 20213:48 28 Caamsaa 2021
Manni Murtii Waliigalaa murteen dabarse filannoorratti dhiibbaa akkamii qaba?
Mana Murtii Waliigalaatti Dhaddachi Ijibbaataa Jimaata Caamsaa 21, namoonni to'annoo seeraa jala jiran filannoo keessa hirmaachuu danda'umoo hin danda'an kan jedhurratti ji'ootaaf mormii taasifamaa turerratti murtoo dabarseera.
...tti maxxanfame 5:51 13 Guraandhala 20215:51 13 Guraandhala 2021
'Jawaar Mohaammad haatisaa gaaffachuu deemtullee inni garuu beekuu hindandeenye'- KFO
Paartiin Kongirasii Federaalawaa Ooomo (KFO)n haalli fayyaa namoota mana hidhaa keessatti lagannaa nyaataarratti argamanii kan Obbo Jawaar Mohaammad, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanaafi Shamsaddiin Xahaafaa sadarkaa yaaddeessaarra jira jechuun ibsa baase.
...tti maxxanfame 8:40 6 Guraandhala 20218:40 6 Guraandhala 2021
Kom. Mirga Namoomaa Itoophiyaa daawwannaa isaan waa'ee Jawaar Mahaammad fa'aa maal arge?
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa lagannaa nyaatarra kan jiran, himatamtoota galme Obbo Jawaar Mohammaad fa’aa jala jiran daawwachuu Jimaata kaleessaa beeksise.
...tti maxxanfame 4:49 4 Guraandhala 20214:49 4 Guraandhala 2021
Boordiin filannoo waa'ee hiriira deeggarsaa MM Abiyiif Oromiyaatti bahamee maal jedhee?
Boordiin Filannoo biyyaalessa Itoophiyaa dubbii fi dhaadannoowwan hiriira deeggarsaa MM Abiy Ahimadiif Oromiyatti bahame irratti dhagahame, kan labsii fi naamusa galmee paartilee siyaasaa cabsedha jedhe.
...tti maxxanfame 13:06 13 Amajjii 202113:06 13 Amajjii 2021
'Murtee filannoorratti hin hirmaannu jedhurra hin geenye'- KFO
Koongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n haala amma jiruun filannoorratti hirmaachuun baay'ee akka isa rakkisu ibsa har'a miidiyaalef laaten himeera.
...tti maxxanfame 4:28 18 Sadaasa 20204:28 18 Sadaasa 2020
Ameerikaan haleellaa misaa'elaa TPLF Eertiraa irratti rawwatte balaaleffatte
Ameerikaan haleellaa misaa'elaa TPLF buufata xiyyaaraa Asmaraa irratti rawwatte cimsitee balaaleffatte.
Page 1 Keessaa 3